खोटाङका मदन राई नयाँ शक्तिमा लागे, के भन्छन् उनी (अन्तरवार्ता) - Hamrokhotang
Home » News » Photo Gallary » Serofero » खोटाङका मदन राई नयाँ शक्तिमा लागे, के भन्छन् उनी (अन्तरवार्ता)
खोटाङका मदन राई नयाँ शक्तिमा लागे, के भन्छन् उनी (अन्तरवार्ता)
By: HamroKhotang.com on Monday, January 25, 2016 /
काठमाडौं ११ माघ । खोटाङका मदन राई डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति अभियानमा लागेका छन् । भट्टराईले १० माघमा राजधानीमा घोषणा गरेको ३५ सदस्यीय अन्तरिम केन्द्रिय परिषदमा राई पनि समावेश छन् । भट्टराईले केही महिनामा नै २६५ केन्द्रिय सहितको नयाँ पार्टी खोल्दैछन् । राईले भट्टराईको देश विकासको योजना राम्रो लागेर आफू पनि सो अभियानमा लागेको बताए । हाम्रो खोटाङ डटकमसँगको कुराकानीमा उनले खोटाङमा बाटोघाटो भए धेरै राम्रो हुने र कृषिका लागि नमूना ठाउँ बनाउन पनि सकिने बताए । कृषिविदका रुपमा परिचित र पछिल्लो पटक राजनीतिमा लागेको उनै राईसँग हाम्रो खोटाङ डटकमका लागि टेनिस रोकाले गरेको कुराकानी:
नयाँ शक्तिमा लाग्ने सोच कसरी बनाउनुभयो ?
नेपालको विकास हुनुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको हो । नेपालको विकासका लागि मैले उपयुक्त मौका खोजिरहेको थिए, धेरै पटक खोजेँ, संविधान जारी भएपछि अब चाँही देशको विकास गर्ने मौका आयो जस्तो लागेको थियो, यस्तै बेला उहाँ (नयाँ शक्ति अभियानका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई) ले नै बोलाउनुभयो, धेरै पटक सल्लाह भयो र कुरा मिल्यो । उहाँले देश विकासको योजना र लक्ष्य सुनाउँदा मलाई चित्त बुझ्यो त्यसैले म पनि लागेँ ।
डा. भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्तिले देशको विकास गर्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने त ?
होइन होइन, उहाँ एक्लैले गर्ने होइन । उहाँ चिनिने अनुहार हो र उहाँको भिजन हो, हात दिने हामीले हो । कर्म गर्ने हामीहरुले हो । म त पहिले कांग्रेस पार्टीमा काम गरेको अन्य अन्य ठाउँमा काम गरेको हेर्नुस् भिजन दिनेमा उहाँजतिको देखिन । अब देउता त पाइदैन, मान्छे असल खराब हुन्छन् त्यसमा सबभन्दा खराब चाँही नहोस् । खराबमध्येहरुमा सबैभन्दा राम्रो चाँही कुन हो भन्दा मेरो विचारमा डा. भट्टराई नै हो । त्यसैले यो टिममा म र हामी लाग्दा केही चाँही परिवर्तन हुन्छ । हामी पावर भन्दा नि परिवर्तन विकास भनेर लागेका छौं, पावरका पछि लाग्ने त शासक भई गयो नि, त्यसैले हामी शासक भन्दा नि सेवक बन्नेमा छौं ।
तपाई खोटाङका बासिन्दा हो, यो पार्टीमा लागेर खोटाङका लागि के गर्नुहुन्छ ?
खोटाङका लागि मात्र होइन, सबै देशका लागि समान हो । म यो परिषदमा भएपछि सबैको हेर्नुपर्छ तर खोटाङको भएकाले जिल्लाको लागि बढी हेर्छु । खोटाङमा त मेरो पूरै समूह छ नि, फाउण्डेशन बनाएर व्यापक रुपमा विकासको काम भईरहेको छ । यसलाई पुरै प्रान्तमा फैलाउने काम भईरहेको छ । उत्पादन रोजगारीको कुरा अगाडी बढाउनेमा छौं ।
तपाईले खोटाङमा देखेका समस्याहरु चाँही के के हुन् नि ?
यातायात हो । यातायात त खोटाङको मात्र होइन नेपालकै हो, अझ खोटाङको गाउँ गाउँमा बाटो पुर्याईदिए देखि हुने हो । मैले त बाटोको कुरा डा. भट्टराईलाई भनेको छु हाम्रो सिंगल नीति हुनुपर्छ त्यो भनेको सबै ठाउँमा बाटो पुग्नुपर्दछ । बाटो भएपछि त्यहाँ अटोमेटिक बिजुली बनाउने समूहहरु आउँछन् । बिजुली र बाटो भएपछि त्यहाँ उद्योग धन्दा, व्यापार, उत्पादन सबै हुन्छ । त्यसकारण हामीले भनेको बाटो हो, यो भयो भने रोजागारी त्यसै बढेर जान्छ ।
तपाई त कृषिविज्ञ पनि हो, खोटाङमा कृषिको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
खोटाङमा कृषिको भयंकर सम्भावना छ । तर अहिले पहुँच नै छैन, बाटोघाटो नै छैन । सम्भावना त खोटाङ भनेको दोस्रो इलाम बराबर हो । पश्चिम साइड हलेसी साइड अलि सुख्खा छ, त्यसैलाई त्यो क्षेत्रलाई पर्यटकिय वा सेवा क्षेत्रमा लाउनुपर्छ नत्रभने पूर्वी भाग, दक्षिण भाग त उत्पादनको यति धेरै सम्भावना, फलफुल, चिया, दुध, सब्जी, धानहरु केके छ के के, म त भन्छु खोटाङ त फेरि पानी नै पानी छ, उर्बरभूमि नमुना बनाउन सकिन्छ ।